Barlamaanka Jaamacadda Carabta oo taageeray in la qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya
Shir Baarlamaanka Jaamacadda Carabtu ay maanta ku yeesheen magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar, ayaa lagu taageeray in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaraan.
Tallaabadaan ayaa dawladda Soomaaliya u ololaynaysay muddo sannado ah si ciidanka Soomaaliya dib loogu dhiso, taasi oo weli Golaha Ammaanku aanu go’aan ka qaadan.
Kulankan ayaa Soomaaliya waxaa uga qeyb galay afar xildhibaan oo uu ku jiro Pof. Maxamed Cumar Dalxa, waxaana shirkaasi lagaga dooday arrimo badan oo quseeya dalalka Carabta gaar ahaan dalalka Soomaaliya, Suuriya, Falastiin iyo dalal kale.
War murtiyeed kasoo baxay gebagabadii shirka Barlamaanada dalalka Carbeed ayaa waxa lagu xusay in la taageero dowladda Soomaaliya iyo in la qaado cunaqabateynta dhinaca hubka ah ee saaran dowladda Soomaaliya.
Prof. Dalxa oo la hadlayey idaacadda VOA ayaa sheegay in shirku isku raacay in Soomaaliya la siiyo taageero maadi iyo macnawiba leh si ay u dhisato hay'adaheeda dastuuriga ah iyo sidoo kale in la qaado cunaqabateynta dhinaca hubka ee saaran, taasoo laysku wada raacay kaddib cod gacan taag ah, si Soomaaliya ay dib ugu dhisato ciidamadeeda ammaanka.
Prof. Dalxa ayaa waxa kale oo uu sheegay in qaraarrada kasoo baxay shirka barlamaannada Carbeed uu ka mid ahaa qaraar lagu taageerayo qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha ee dalalka deriska la ah Soomaaliya.
Shirka Barlamaannada Carbeed ayaa waxa kasoo qayb galay ergooyin ka socday barlamaannada 21 dal oo xubno ka ah Ururka Jaamacadda Carabta, waxaana shirka ka maqnaa xubnihii barlamaanka dalka Suuriya oo dagaallada dalkooda ka jira awogood ay u suurtoobi weysay inay shirka soo xaadiraan.